PHOTO: supplied Sicela ukufuniswa abazali ba-Andile noThabang Nkabinde abangaziwa ukuthi bakuphi. Sicela onolwazi athinte uSocial Worker Miss Z.T Mqadi ku 033 5050 084/6
Kumenywa bonke abantu bakwa Mshengu abangamalungu esizwe samaChagwe enkonzweni yabo yonyaka eyolandelwa izoso eyoba kwaMshengu, eZwelethu section Thornville eduze nase Pietermaritzburg ngomhlaka 16 December 2015 ngo 9 ekuseni.
Abanemibuzo bangathintana no Nobhala uMakhosonke Mshengu 082 840 2136 or 060 602 9245.
Ngicela ukufuniswa uBonga Mkhize ubaba kaNtobeko Mchunu ozalwa uFunayiphi Mchunu ongasekho emhlabeni. Onolwazi angathintana noSonhlalakahle uMrs Dlamini ku 033 392 8653
Sicela ukufuniswa ubaba kaXolani Madladla kanye noXoliswa Mdladla umama wabo nguThembekile Mdladla ongasekho emhlabeni owayehlala kwaNyavu eMkhambathini. Sicela onolwazi axhumane no Social Worker uNdwandwe ku 031 7851195
Ngicela ukufuniswa ubaba kaSimamkele Philasande Mvundla owayezalwa uBonisiwe Praxidix Ngubane ongasekho emhlabeni owashona mhlaka 20 March 2008. USimamkele wazalwa mhlaka 05-12-2007.
Ngicela ukufuniswa ubaba kaNoxolo Ngubane owazalwa mhlaka 05-09-1999 ezalwa uNomsa Ngubane owashona mhlaka 25 February 2009.
Ngicela ukufuniswa ubaba ka Omhle Mkhabela no Lufefe Mkhabela ongaziwa. Laba bobabili bazalwa uLondiwe Dlamini ongasekho emhlabeni. Sicela uma ekhona onolwazi athintane nosonhlalakahle uMiss Mqadi kulenamba 033 505 0087/4/3 noma ku 073 247 8942
Sicela ukufuniswa uDieketso Mndaweni umama ka-Nkeletseng Thusi. Ubaba kaNkeletseng okunguSphiwe Thusi ongasekho. UNkeletseng kumanje uhlala nogogo wakhe u-Engeline Thusi endaweni yaseMaqeleni, Imbali Unit J Ext. Sicela onolwazi ngoDieketso akathintane noSonhlalakahle uMs N.E Ngubane ku 033 3928617 noma ku 033 392 8621
Sicela ukufuniswa uKhululiwe Thusi waSokhasini kwaSwayimane ongaziwa ukuthi wayaphi ongumama kaNobuhle Thusi noSbonelo Thusi. Kanti ubaba wabo nguBhekani Simeon Maphumulo wakwaSwayimane naye. Sicela onolwazi athinte uSocial Worker uMs Thabile Ntuli ku 033 5020 072.
Sicela uKufuniswa uNompumelelo Nxumalo ongumama ka Andile Shelembe. uBaba wakhe u Bkhekumuzi Shelembe owayengowase Sweetwaters ongasekho emhlabeni. Onolwazi sicela ashayele uSonhlalakahle u AS Mncube kule nombolo 033 5050 083/4/7
Ngicela ukufuniswa ubaba walezingane ezilandelayo, u-Omuhle Mkhabela noThabiso Mkhabela abazalwa uLondiwe Dlamini ongasekho emhlabeni. Sicela uma ekhona omaziyo athintane nosonhlalakahle uMiss Mqadi ku 033-5050 087/4/3 noma ku 0732478942